Miseensi paarlaamaa Yugaandaa 'haadha warraa kee reebi' jedhe' - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Onesimus Twinaamaasiko booda keessa BBC'tti akka himeetti kabaluun 'gaariidha' garuu reebichi miidhaafi du'a qaqabsiisu gaarii miti jedhe.
Miseensi paarlaamaa Yugaandaa miidhaa dubartootaa labsuun dhiiroonni haadha warraa saanii ''reebuu'' qabu jechuusaatiif dhiifama akka gaafatuuf itti himameera.
Onesimos Twinaamaaskoo tTV biyyattii NTV jedhamu irratti akka jedheetti, 'akka dhiiraatti haadha warraa kee qixaaxu qabda.'
''Sirreessuudhaaf reebuu qabaatta, waan fedhees yoo ta'ee sirreessuuf reebu qabda.''
Haa ta'u malee jechi isaa kunis fayyadamtoota midiyaalee hawaasummaatiin baay'ee qeeqame. Akka dhaabbanni mirgawwan dubartootaa tokko jedheettis, namni kun waldhaansa barbaachisa.
''Mr Twinaamaasiko gocha sarba mirgaa raawwateef uummata fuulduratti dubartoota hunda dhiifama gaafachuu qabaata,'' Daayaanaa Kaagere dhaabbata jiddugala ittisa Miidhaa sarba mirgaa irraa BBC'tti himtee jirti.
''Waan isa kabachiisu raawwachuun jecha isaa haquu qabaata. Miseensi paarlaamaa miidhaa dubartootaa haala kanaan ibsuun isaa baayyee nama naasisa. Kunis gocha yakkaati.''
Yudaandaatti dubartoota umuriinsaanii waggaa 15-24 jidduutti argaman keessaa shanan isaanii keessaa tokko miidhaa mana keessaafi quunnamtii saalaatiif kan saaxilamaniidha, akka gabaasa bara darbe motummaan maxxanfameetti.
Fayyadamtoonni midiyaalee hawaasaa sagalee gabaabaa gaazexeessaa NTV waraabamee intarneetiin gadhiifame irratti qeeqiinsa hiraa turan.
Namoonni kuun yoo yada My Twinaamaasiko deegaran, hedduun garuu mormaaniiru.
Gaaffiifi deebii BBC Focus on Africa' waliin taasiseenis waa'ee gaa'ila mataasaa eerun haalli inni itti of ibsuuf yaale akksi jechuun ture:
''Ani jechuu kanan barbaade reebiicha cimaa miidhaafi du'aaf saaxilu miti. Garuu kaballaan omaa mitiin jedha! Sababiinsaas sirreefamaaf na waama waan ta'eef. Waliin teenyee furmaata itti kennu qabaanna.
''Yeroo tokko haadha manaa kiyyaan kabalameera. Anaaf kunis rakkin hinturre. Boodas garaa garummaa keenya furree jirra. Anis kabalee beeke. Waan balleesiteef.''
Garuu Addee Kaagereen ilaalchii mana kanaa baayyee badaadha.
''Lolaan furmaanni dhufu malu akka hinjirre amana. Kaballaan kunis hangam deemu akka malu hinbeekamu.''
Akka isheettis, malliwwan ittiin wal diddaan hikamu mala heedduutu jira. Fakkeenyaaf, waliin manaa bahanii bakka qoofniitti mari'achuun furmaata batbaaduun ni danda'ama.
''Akka abbaa warraafi haadha warratti gara tajaajila gorsaa deemu qabaatu,'' jettee jirti Addee Kaageereen waan waa'ee gaa'ila saa akkasiin dubbateefu.
''Dhiiroonni baayyeen ofirtulummaa keessoo isaanitin kan ka'ees tajaajila keenya osoo hinargatiin hafu. garuu haala kana irratti deegarsa barbaaduun gaarii ta'usaa isaan jajabeessu barbaanna.''
Jechi Mr Twinaamaasikoo kunis haasaa Pirezidaantiin biyyatti Yoweri Museveni torban darbee keessa dhiiroonni haadha warraafi hiriyaa dubartii isaanii rukutan 'gowwaadha' jedhaniif deebii kennuuf ture.
''Dhiiroonni dubartii reeban goowwaafi kan of hinbeekneedha,'' jechuun ture kan hirmaattoota guyyaa addunyaa dubartootaa kabajuuf walitti qabamanitti himan akka oduu Kirisitiyaan Yugaandaatti.
Meejar Janaraal Kinfee Daanyaw Tigraayitti to'annoo jala oolan
'Oduun sobaa Facebook irraa namoota ajjeesaa jira'
Haati ilmooshee waggaa lamaaf kofoo konkolaataa keessa dhoksite himatamte
Kaalifoorniyaatti abiddi saafaa nama 42 ajjeese
UFOn qarqara Ayerlaanditti mul'ate dubbii ijoo tahe
Oduuwwan sobaa shanan barana Afriikaa burjaajeessan
Amnistiin badhaasa Suu kiif kenne harkaa fuudhe